अराजक शब्दहरु: September 2020
कपाल: एक गन्थन
कपाल लामै छ ।
तर त्याे भन्दा लामाे छ कपालकै कारण बिटुलिएकाे समय ताँती !
जसरी मलाई कपालले स्याहार खाेजेकाे मन पर्दैन । त्यसैगरी स्याहार नपाएकाे कपाल उपर राय ब्यक्त गरेकाे वाहियात र बकवास समेत लाग्छ । तथापि हाँसाेले टार्ने सीप सिक्दैैछु ।
सिक्नै चाहे हरेक पल सिकाईका विश्वविद्यालय छन् ।
जाबाे जुल्फिले कहिले ट्यापे बनाउँछ कहिले बाेल्ड । बाेल्डकाे परिभाषा के? ट्यापेकाे कपालसँगकाे साईनाे के हाे? कपाल किन पाल्न मन लाग्छ? वा कपाल किन काटिँदैन ? कपाल नकाट्नुसँग हर्माेनकाे सम्बन्ध छ त ? कैयन कपालसँग सम्बन्धित सवाललाई बाल नदिउँ भन्दा पनि धर छैन ।
महिला र पुरुषकाे कपालमा के फरक छ? जाेगी र कर्मचारीकाे कपालमा कुनै साईनु छ त?
कपालकै कारण कैयन अनाैपचारिक स्पष्टिकरण शालिन र शान्त भएर दिएतापनि के त्यसले जिज्ञासुलाई सञ्तुष्ट बनायाे हाेला त?
आफ्नै सामान्य स्याहार सुसारका बाबजुद कपाल मनबाट हटिसक्याे तर शीरबाट हटेकाे छैन ।
साँच्चै कपालकाे किन यति माया लाग्छ ? कुनै बेला ‍औलाभरि नङ्ग बढाएर काँटा चम्चाकाे आदत बस्दा आफैलाई कहिले एलियन जस्ताे त कतै अरु भन्दा अलग विशेष लाग्ने भ्रम थियाे ।
कतै त्यसैकाे अर्काे किस्ता वा सँस्करण त हैन? कहिले मुन्द्राकाे सौख त कहिले ट्याटुकाे । कानमा टप लगाउन र छाेरीकाे कानसँगै आफु पनि कान छेडेर सुशुप्त रहर पुरा गरेकै त हाे ।
कपालले कसलाई आपत्ति छ ? तिनलाई छ जाे पहिले मेरा कपाल छाेटा र छरिताे देखेका थिए । तर के त्यहि नै मानक बन्नु जरुरी हाे त?
अहिले लाग्छ कपालकै कारण कपाल झै लम्बिएका बातका थान कसरी सकिएलान?
मेराे कपाल अमर रहाेस्
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 11:12:00 PM No comments:
स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुको मुख्य कारण केन्द्रीय स्तरमा काम गर्ने नेता र कर्मचारी अझै पनि एकात्मक शासनपद्धतिबाट काम गरिरहनु हो।
संविधान संघीय भए पनि पार्टी एकात्मक हुँदा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताले प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिई आफैंले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा विरोध गर्ने, आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने वातावरणसमेत बनेको छैन।
राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा ल्याउन नचाहनु पनि यही होडबाजीमा हुने भागबन्डा कारण हो।
कुनै पनि संविधान बनाउँदैमा पूर्ण हुँदैन। परिस्कृत गर्दै, कमीकमजोरी सुधार्दै लैजाने प्रक्रियागत कुरा हो। संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। यसलाई जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्याबाट आवश्यकताअनुसार संशोधनमार्फत राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ। परिस्कृत गरी मजबुत बनाउँदै लैजान यो संविधान पर्याप्त छ। तर, सुधार गरेर लैजाने कि नलैजाने भन्ने कुरा न्यायपालिका र राजनीतिज्ञको हातमा छ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 11:04:00 PM No comments:
Labels: संघ र प्रदेश अन्तर्सम्बन्ध
कमजोर स्वास्थ्य भएको व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेजस्तै स्थिति
अहिले बजारमा तरलता बढी भएकाले ब्याजदर घट्दै छ। यस्तो बेलामा सरकारले ऋण लिनु हितकर हुन्छ।
भुक्तानी गर्न तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्न सकिएन भने आन्तरिक ऋणमा देशभित्र हंगामा हुन सक्छ भने बाह्य ऋणमा मुलुक डिफल्टर हुन सक्छ।
Labels: वित्त व्यवस्थापन
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 10:14:00 PM No comments:
कतिपय व्यक्तिले संस्कृतिलाई नाचगान, भेषभूषा र खानपानभन्दा बढी केही देख्दैनन्। यही सतही बुझाइका आधारमा संस्कृतिप्रतिको आमदृष्टिकोण संकुचित बनेको प्रतीत हुन्छ। संस्कृति ब्रह्मजत्तिकै व्यापक र अनन्त छ। सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म, शिक्षा आदिले संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन्।
संस्कृति जीवनशैली हो। यो नै संस्कृतिको सरल परिभाषा हो। यद्यपि, यतिले मात्रै संस्कृतिको सांगोपांगो परिभाषा समेट्दैन। संस्कृतिलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत प्रकटीकरण गर्ने क्रममा कतिपय विज्ञले यसलाई समुद्रमा तैरिने हिमशिला (आइसवर्ग) सँग दाँज्ने गर्छन्। हिमशिलाको १० भागको एक भाग मात्र पानीबाहिर देखा पर्छ, बाँकी ठूलो हिस्सा पानीभित्र लुकेर बस्छ।
यसको अर्थ हो– संस्कृतिको दृश्यभन्दा अदृश्य भाग कता हो कता भीमकाय हुन्छ। संस्कृतिको दृश्य र अदृश्य पक्षको गठजोड दर्शाउन अंग्रेजीमा ‘कल्चरल आइसवर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसलाई विम्ब मानेर चिन्तनमनन गर्ने हो भने संस्कृतिको व्यापकता र संवेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ।
कुनै पनि संस्कृतिअन्तर्गत पहिरन, परिकार, चाडपर्व आदि सहजै देखिने पक्षहरू हुन् भने जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित तमाम मूल्य–मान्यता र विश्वास प्रणाली सतहमा देखिँदैनन्। साथै, कुनै पनि समुदायको संस्कृति इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ। इतिहास पनि अदृश्य हुन्छ।
अदृश्य संस्कृति नितान्त शक्तिशाली र संवेदनशील हुन्छ। यस्ता अदृश्य तत्त्वहरू नै हरेक संस्कृतिको चालक शक्ति (सफ्टवेयर) हुन्। अमूर्त अवस्थामा रहेका यी अदृश्य तत्त्व समयको लामो कालखण्डमा निर्माण भएका हुन्छन्, जसको दायरा भयानक किसिमले व्यापक छ।
संस्कृतिका यी तमाम दृश्य–अदृश्य पक्ष बुझ्न तेस्रो आँखा आवश्यक पर्छ। त्यो हो– सांस्कृतिक साक्षरता। लेखपढ गर्न साक्षर बन्न आवश्यक भए झै कुनै जाति वा समुदायको संस्कृतिसँग परिचित बन्न सांस्कृतिक दृष्टिले साक्षर बन्नुपर्छ।
आखिर के हो त सांस्कृतिक साक्षरता ? कुनै समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षबारे जानकार हुनु नै सामान्य अर्थमा सांस्कृतिक साक्षरता होे। तर, हरेक व्यक्ति सबै समुदायको संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार हुन व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन। तैपनि, हरेक व्यक्तिले सबै समुदायको संस्कृतिप्रति समभाव र सद्भाव राख्न भने अवश्य सक्छन्। यसलाई नै सांस्कृतिक साक्षरताको ‘बटमलाइन’ मानिन्छ, जुन सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको परिचायक पनि हो।
सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको अभावमा विश्वको विभिन्न भाग अशान्त छ। सांस्कृतिक असहिष्णुताले अनेकौं समुदाय अपमानका शृंखलता भोग्न अभिशप्त छन्। ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’, सांस्कृतिक अपव्याख्या, हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) र रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) लाई सांस्कृतिक द्वन्द्वको मूल स्रोत मानिन्छ।
आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई मात्र उच्च मूल्यांकन गरेर इतर समुदायको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई तुच्छ ठान्ने, आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा जगमा उभिएर अरूलाई असन्तुलित किसिमले मूल्यांकन गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको लेन्सबाट मात्र अरूलाई हेर्ने परिपाटी नै ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ हो।
सांस्कृतिक सहिष्णुताको दृष्टिले ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ घातक मानिन्छ। आफ्नो संस्कृतिप्रति आदरभाव दर्शाउने र गौरवान्वित हुने नैसर्गिक अधिकार सबैलाई छ। तर आफ्नो संस्कृतिप्रति गौरव व्यक्त गर्दा अरूको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न। सांस्कृतिक साक्षरताले यस गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्छ।
अल्पज्ञानवश वा पूर्वाग्रहवश कसैको संस्कृतिको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्ने र वास्तविकता नबुझी हुलले सम्प्रेषण गरेको गलत विचारलाई आत्मसात गर्ने हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) ले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई क्षयीकरण गर्छ। यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ।
यसैगरी, कसैको जीवनशैली र परम्परालाई अति सामान्यीकरण गरेर उसको गलत वा त्रुटिपूर्ण छवि निर्माण गर्ने परिपाटीले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई पतनोन्मुख बनाइदिन्छ। यस किसिमको परिपाटीलाई रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) भनिन्छ, जुन भेदभाव, बहिष्करण र हिंसाको स्रोत बन्न पुग्छ।
कुनै जाति वा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने वा गलत किसिमले चित्रण गर्ने कार्य पनि ‘स्टिरियोटाइप्स्’ कै हिस्सा हो। ‘स्टिरियोटाइप्स्’ ले सम्बन्धित समुदायलाई मानसिक चोट दिन्छ। कुनै समुदायको पहिरन, भाषा, खाद्यवस्तु, आनीबानी, प्रवृत्ति, धर्म आदिलाई लिएर ‘स्टिरियोटाइप्स्’ हुर्किने वातावरण बन्न सक्छ।
सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न ‘स्टिरियोटाइप्स्’ बाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिनुपर्छ। यसको सरल र सहज उपाय हो– आफुइतरका संस्कृतिप्रति फराकिलो र उदार दृष्टिकोण राख्नु। अर्को शब्दमा अरूको संस्कृतिप्रति सम्मान भाव राख्दा ‘स्टिरियोटाइप्स्’ स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ। अरूको संस्कृतिप्रति राखिने उदार भावसँग यसको केन्द्रीय मर्म लुकेको छ। सम्बन्धित समुदायको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरिदिने हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिने धेरैजसो ‘स्टिरियोटाइप्स्’ त्यसै हटेर जान्छ।
समग्रमा भन्दा सांस्कृतिक साक्षरताले सांस्कृतिक विषयवस्तुको ज्ञान र सुझबुझसँग गहिरो नाता–सम्बन्ध राख्छ। सांस्कृतिक सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘सर्वधर्म समभाव’ सांस्कृतिक साक्षरताका गुरु मन्त्र हुन्। वास्तवमा संस्कृति संवदेनशील विषय हो। समुदायबीच विद्यमान सांस्कृतिक द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।
यसका लागि पर्याप्त संवदेनशीलता आवश्यक पर्छ। नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता फक्रिएको मुलुकमा हाम्रा नीति र व्यावहारमा उच्चतम् सांस्कृतिक संवदेनशीलता आवश्यक छ। देशको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परिवेशले सांस्कृतिक साक्षरताको महत्त्वबोध गराइरहेको छ।
लोकतन्त्रवादीमा समेत यसका समग्र मूल्य र मान्यताको अवलम्बन नगरी आफूखुसी शासन सञ्चालन गरी लोकतन्त्रकै दुरूपयोग गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्त पाइन्छन्।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसको प्रयोग व्यवहारमा कसरी भइराखेको छ, सोको परीक्षण गर्न सर्वप्रथम लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै अभाव देखिन्न तर नागरिकका मौलिक हकको हनन पर्याप्त मात्रामा भइराखेका छन्।
अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याई मसलका आधारमा राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई दलहरूले परित्याग गर्नु र अपराधीप्रति कडा हिसाबले जनताले अनुभूति गर्ने प्रकारले अघि बढ्दा मात्र यो अवस्थामा सुधार आउनेछ।
लोकतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने अपराध भनेको भ्रष्टाचार पनि हो। देशको राजनीति, न्याय र अन्य सबै सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बन्छ। नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्न अभयदान पाएको छ। उच्च स्तरबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन अभाव छ।
सबै प्रकारका ठूला, नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रक निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ।
राजनीतिलाई भ्रष्ट प्रशासकले गलत काम गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिले विभिन्न समयमा बदनाम भएका पात्रलाई खोजीखोजी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने गर्दासमेत प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
जुन देशमा न्याय, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यस देशमा लोकतन्त्रको विकास हुने विषय मृगतृष्णा मात्र हुनेछ। नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।
संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामै पुनरावलोकन जरुरी छ। सबै क्षेत्र विशेषगरी राजनीतिले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:18:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:05:00 PM No comments: